Shiinaha Gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida iyo soosaarayaasha | Smart Miisaan
Mashiinka wax lagu xaraysto ee gawaarida qashinka lagu rito
Nidaamka loo yaqaan 'tray denester system' wuxuu ka kooban yahay mashiinada soosocda:
1. SW-LC12 isku-darka miisaan ahaan - isku miisaamida iyo buuxinta waxyaabaha
2. Tray denester - si otomaatig ah ayuu u dhacayaa baakadaha madhan
3. Gawaarida xarkaha wata oo wata aaladda joojinta - si toos ah u jooji baakadaha madhan ee buuxinta booska, sii daa saxanka ka dib buuxinta
10-1500 garaam / madaxa
10-6000 garaam / mashiin
10-40 trays / min
Wasaqda caagga ah, koobka caagga ah
Isku-dhafka toosan ee miisaanka culus: mootada mashiinka (wadista qaybsan)
Diidmada tray: xakamaynta PLC
Mashiinka wax lagu duubo ee jajabku wuxuu awoodaa inuu miisaamo oo uu buuxiyo dhammaan noocyada kala duwan ee cuntooyinka fudud, sida jajabyada, jajabyada, shiilannada faransiiska, cunnada fudud ee galleyda, cunnada fudud ee budada ah iyo wixii la mid ah.
Hagaajinta hanaqaadka musqulaha
1. Kor u qaad galka alwaaxyada iyo meeleeyaha, ka dibna ku dheji suuminta kor ugu dhaji sagxadda saxaaradda.
2. Marka uusku nuugo waqtiga korkiisa (usha nuugta oo ku hawlan hoosta saxaarad), waxay bilaabmaysaa faakium. Tallaabo-tallaabo, waxay xisaabisaa waalka hoose Waqtiga sii deynta.
3. Hoos u sii deyn tuubada markay hoos u baxdo waalka tuubada, talaabadani waxay sugaysaa saxanka si buuxda u nuugo.
4. Marka mashiinku tijaabiyo cadaadiska-hoose, dhuuqmada usha dib ayey u dhaqaaqdaa. Isla mar ahaantaana, mashiinku wuxuu xisaabiyaa waqtiga dhuuqida iyo unsucking ilaa saxaaraddu u dhacdo suunka. Dhanka kale, hoos u dhig waalka si aad u geliso iyo kor u dhigto waalka si aad u sii deyso saxaaradda soo socota.
5. Dib-u-warshadeyn ku samee buuxinta saxanka xiga.
• Gawaarida otomaatiga ah ee kaladuwan ama koob buuxinta shaqsi ahaan;
• Mitsubishi PLC + 7I taabashada shaashadda ee waxqabadka deggan;
• Beddelida weelka 'tray cabbir' oo kala duwan oo aan qalab lahayn, badbaadin waqtiga wax soo saarka;
• Birta 304 oo birta ah oo dhammeystiran oo leh qaabeynta caddeynta biyaha, si loogu shaqeeyo jawiga qoyaan dheer;
• Miisaanka quudinta gacanta ayaa ku habboon hilibka, alaabada dhegta ah, waxyaabaha jilicsan iyo wixii la mid ah;
• Saxnaan sare oo ku saabsan unugyada loo yaqaan 'Minebea cell cell'.
Tray sawirka mashiinka wax lagu rakibo
1. Mashiinkan miyuu ku habboon yahay 1 saxaf oo keliya?
Maya, dhererka saxanka iyo balaca ayaa lagu hagaajin karaa tiro baaxad leh. Haddii aad leedahay 2-3 nooc oo ah saxaarad cabbir cabbir ah. Fadlan nala wadaag, waxaan isku deyi doonnaa inaan naqshadeynno nooca loo yaqaan 'tray denester' si loogu habeeyo dhammaan saxannadaada.
2. Immisa saxan oo madhan ayay kaydin karaan hal waqti?
Waxay kaydin kartaa ilaa 80 baakadood. Waxaan leenahay is-quudinta xamuulka faaruqinta ah ee madhan, waan ku faraxsanahay inaan kugula tallinno haddii loo baahdo.
Hore: Mashiinka xaashiyaha wareegga Rotary 8 ee xarunta shaqada
Xiga: Xaqiiqo yar oo sax ah 14 madax miisaan culus oo wejiga cannabis ah
mashiinka baakadaha xirmooyinka
mashiinka wax lagu rakibo
Cunto karbaashka baradho baradho nidaamka mashiinnada